सार्लाही ज़िल्लाको लालबन्दी नगरपालिका वडा न.८ का वडा अध्यक्षमा नेकपा माओबादीकाशुक्र बहादुर पाख़्रीनको जित निश्चित – Vision Online News
सार्लाही ज़िल्लाको लालबन्दी नगरपालिका वडा न.८ का वडा अध्यक्षमा नेकपा माओबादीकाशुक्र बहादुर पाख़्रीनको जित निश्चित
भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित: २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार १६:३४ 341 पटक हेरिएको
सर्लाही, बैशाख २३ ।
लालबन्दीका “लाल” शुक्र ब. पाख्रिन “ हे … लालबन्दिको रातो … रातो … गोलभेडा “ चलचित्र धर्म पुत्र को यो गित नेपाली जनमनमा प्रसिद्ध छ । यद्यपि सार्लाही ज़िल्लाको लालबन्दी नगरपालिका गोलभेडा मात्र हैन तरकारीको लागीपनी उत्तिकै प्रसिद्ध छ । खबर चासोको हिसाबले यो नगरी बत्ती मुनिको अध्यारो जस्तो पनी लाग्छ । खैर “ नम्बरी सुन लाई कसी लाउन पर्दैन “ भन्छन । सायद देसका ठुला खबर र छापामा आफू प्राथमिकतामा नपरेपनी लालबन्दीको गुनासो छैन । आउनुस, एकैछिन हो त्यही लालबन्दी वडा नम्बर ८ पुग़ौ जहाँ तामाङ समुदायका ३५ बर्सिय एक तन्नेरी युवा, सुक्र बहादुर पाख्रिन कम्मर कसेर माओवादी केन्द्र को तर्फबाट वडा अध्यक्ष भिडीरहेका छन ।
राजनीति सास्त्रमा डिग्रीसम्मको अध्यायन सकेका शुक्र बहादुर पाख्रिन २०६४ साल बाट शिक्षण पेशामा आबद्ध भए । २०७४ साल बाट लालबन्दी नगरपालिका ८ स्थित चन्द्रपुरमा रहेको आधारभूत बिध्यालय मा प्रधानाध्यापक को भूमिकामा रहे । झन्डै २ दशकको शिक्षण पेशा/अवधिमा उनले चक डस्टर मात्र घोटेनन । सहर र समाजको विकास को लागी पनी ईमानदारी पूर्वक दिमाख घोट्ने काम गरे । सामाजिक सांस्कृतिक बिभिन्न क्रियायाकलाहरुमा सधै सक्रिय रहे । लालबन्दी खानेपानी उपभोक्ता समीति, सचिब हुदा ताका सहरी खानेपानी आयोजना पार्न सफल पाख्रिनलाई शिक्षण पेशा बिस्तारै साघुरो लाग्न थाल्यो । समाज सेवा मा बढी रुचि भएकोले दुई मा एक रोज्नै पर्ने थियो त्यसैले, हुँदा छंदाको जागिर छाडेर राजनीतिमा होम्मीए ।
लामो समय यता माओबादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता समेत रहेका उनको पारिवारीक पृष्ठभुमी भने निकै कस्टपूर्ण छ । घरको जेठोछोरो कम्जोर आर्थिक अवस्था । तत्कालीन समय आमाले दाउरा बेचेर सन्तान पढाएको कुरा याद गर्छन । सानैबाट पढ़ाईमा तिब्र पाख्रिन कक्षा ८ (आठ) सम्म पुग्दा आफ्ना जूनियर विद्यार्थी हरूलाइ ट्यूशन पढाएर खर्च को जोहो गर्ने भै सकेका थिए। हुनत कठिन परिस्थिति हरुमा कतिपय मानिसहरूले गर्ने तुच्छ टिप्पणी र ब्यबहार मुटुमै खिल बनेर गढेको छ । बितेको कुरा न सम्झौऊ । समय सधै एकै नास हुदैन । कठोर संघर्ष एकाग्र मेहनत को प्रतिफल बिस्तारै हुर्किदै पढदै र बढ़दै जाने क्रम मा पारिवारिक अवस्था क्रमस राम्रो हूदै गयो । अहिले एक छाक खान एक सरो लाउन खाँचो छैन ।
समय अनुक्रम संगै उनको मनमा गाऊँ, टोल मा बिद्दयमान समाजको दैनिकी संग जोडीएका झीना मसिना समस्या । अभाव, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई सामूहिक रूपमा कसरी हल गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थाल्यो । सामाजिक प्राणी भएपछी आफू मात्र नभइ गाऊँ,टोल र समाजलाई माथी उठाउन प्रयास नगरी हून्न । हो, उनलाइ यस्तै लाग्यो ! उपलब्ध जनशक्ति लाई परिणाम मुखी अनी सक्ष्यम बनाउन सकेमात्र राम्रो हुन्छ । जसको लागी अचूक बिधी भनेकै राजनीतिहो भन्ने नीचोड सहित थप सक्रियताका साथ राजनीतिमा होम्मीन आइपुगे ।
करिब ५ देखी ६ सय घर धुरी भएको लालबंदी न.पा. ८ नम्बर वडा लाई नमूना वडा बनाउने उनको सपना छ । लगभग १९ सय ३२ जनसंख्या रहेको उक्त वडामा । उनी जित्ने जिकिर गर्छन । ३५ बर्सिय पाख्रिन ६० देखी ६५ बर्स सम्म सक्रिय राजनीति गर्ने बिचारमा छन । जागिर छोडेर राजनीति मा आउनुभयो जीते राम्रै गर्नुहोला, हारेको खण्डमा के हून्छ ? मैले प्रस्न गरीहाले । राजनीतिमा होम्मीसकेपछी म जीतेपनी हारेपनी गर्नपर्ने काम गरीरहने छु । यदि हो जीतेभने धेरै सजीलोगरी काम गर्न सक्छू भन्छन । मितव्ययिता, आर्थीक पारदर्सिता, भ्रष्टाचार सुन्य समाज उनको प्रतिबद्धता हुन ।
संघ र प्रदेस संग हातेमालो गर्दै बिनिमय गरीएको बजेट बाट स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो आधारभु कुराहरुमा ब्यापक सुधार । कृषिमा आधुनिकीकरण । ग्रिन सिटी को निर्माण, विकेन्द्रित युवाहरुलाई वडामा सम्भव फ़्याट्रीको निर्माण गरी स्वरोजगारको निर्माण । उनको योजना भित्र पर्दछन । लगनसिल बिधार्थी हरुलाई प्रोत्साहन, जनताहरूको स्वास्थ्य बीमा, जेस्ठ नागरिक हरुले भत्ता लीनकै लागी खेप्न परेका सस्ती हरूलाइ व्यवस्थित बानाउने । टोल मै व्यवस्थित खेल मैदान, सीसी क्यामरा को जडान देखी वाईफाई फ्री जोन बनाउने लगाएतका उनको चाहाना छ ।
सान्ती प्रक्रिया यता पार्टीमा केही समस्या आएको पाख्रिन स्विकार गर्दछन । तथापी सुधार सम्भब छ पार्टीको भित्री तह सम्म गयर आम युवा सच्चा सुभचिन्तक हरूले अवसरवाद बिरुद्द झाडु चलाउन ज़रूरी रहेको उनको तर्क छ । अन्त्यतिर, बर्गिय तथा जातिय सोसण, क्षेत्रीय तथा लिङगीय विभेद विरुद्ध आँधी तूफ़ान जस्तै चलेको जनयुद्दमा हज़ारौ को बलि चढ़ाउदै आन्दोलनले आवस्यक ठानेको ठाऊमा बलिदानको कोटा चुक्ता गरेर मुकुल लाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म ल्याइ पूर्याउन चानचुने कुरा नभएको पाख्रिनको तर्क छ । “ समय त लाग्छ मित्र यो ब्यबस्था फेर्न यतिका समय लाग्यो, अब को आवश्यकता भनेको अवस्था बदल्ने नै हो, त्यो सिर्फ गणतन्त्रको पिता, हाम्रो पार्टी र हामीबाट सम्भब छ । “ भोट माग्ने चटारोको बीचमा मुस्कुराउदै उनले कुरा बिटमार्न खोजे । अँ, यी तन्नेरी पुस्ताका उर्जासिल युवा सुक्र ब. पाख्रिन लाई याहाका वडाबासी हरूले हाम्र भन्ने हुन या राम्रा भन्ने हुन । चुनाबी परिणाम आऊँदा सम्म धैर्य ग़रौं ।